Isiswedish kwi-Skype. Ekude isiswedish, ukufunda kunye tutor - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Ezilungileyo mini bonke visitors kweliphepha
Kwaye kuhlangana abantu abantliziyo umdla coincide kunye zezenu, kusoloko kumnandiubani slight kunabela Aseyurophu kwaye kulo lonke ihlabathi. Ke kuthethwa ngumthetho malunga enye yezigidi abantu, ikakhulu abahlali i-Scandinavian Peninsula, apho kubalulekile widespread. Kanjalo isiswedish ulwimi i-Autonomous isicatalanname belong ukuba Efinland. Ukuthetha malunga isakhiwo se-ulwimi, kunokwenzeka iqaphele ukuba Sweden? sele ezininzi ezahluka-hlukileyo intshona ka-ulwimi, ebizwa-dialects, kunye imiqondiso autonomy.
Ukuba ufaka ke, ngathi kum, anomdla kwi-isixhosa ulwimi
Ngoku ukunikezela engundoqo amaqela dialects: sebenza ka-phonetics ngu ebusweni ixesha elifutshane izandi kwaye syllabic ungqinelwano. Umntu abafundi begin ukufunda i-Swedish ulwimi, kokuqwalasela kubaluleke kakhulu beautiful, melodious isandi. Ke ukuba bathethe malunga isijamani, isiswedish, umahluko kwi-Swedish ulwimi, indoda nomfazi births ingaba bamanyene omnye genus. Ngoko ke uhlobo, iyonke kwaye avareji. Kanjalo, uphawu umahluko ingaba kubekho amatyala. Ngoku ulwimi esikolweni umnikelo le umgama kunjalo ukufunda isiswedish nge-Skype - lo ngumzekelo ephambili kunjalo kwaye bahambe. I-ephambili kunjalo yenzelwe kuba abo wishing ukufunda isiswedish njengoko yesibini ulwimi, apho kuya kuba luyafuneka ukuze ishishini okanye unxibelelwano kuba uyise ukuba Sweden. Ngenxa okwangoku, ebalulekileyo inxalenye Scandinavian waqalisa jonga Scandinavian amazwe apho esezantsi ye ophilayo, ngokuchasene isiqalo ka-yangoku utshintsho kweli lizwe lethu, ukukhula yentswela-ngqesho, uphezulwana kakhulu apho kukho uzinzo nophawu bonke Nordic amazwe ukulandelelana ubomi. Abaninzi abo ufuna ukufunda isiswedish ubuso a inani imingeni - nokungabikho kuyimfuneko uluncwadi, ukungakwazi ukuhlanganisa fumana i-experienced tutor. Nangona ukufunda independently, asikholwa recommend, kaninzi abantu ukufunda langaphandle ulwimi, kwi kwezabo amava ezinye iingxaki, umzekelo kunye ubizo, ngenxa kuphela i-experienced tutor unako ixesha elichanekileyo ezingachanekanga ubizo: ka-izandi kwaye amazwi. Kwaye ukuba abantu ndafunda ezingachanekanga ubizo, lungisa kunzima kakhulu kwaye rhoqo kakhulu problematic okanye ukwenzeka. Kanjalo kufuneka ukuqeqesha nge tutor ukuba sele amava, ukuba akazange kuyimfuneko, ngoko ke resort ukuba uncedo a ngakumbi experienced utitshala. Ke ngoko, gcina langaphandle ulwimi hayi kuyimfuneko, sebenzisa iinkonzo a okulungileyo tutor nje kuyimfuneko, nangona hayi constantly umsebenzi kunye nabo, kodwa ngexesha lokuqala inqanaba xa ufuna uqiqe izakhelo ka-ulwimi, kuyimfuneko. Ngaphezulu, kunjalo uyakwazi owakhe ukufunda ulwimi, ukuphucula yakho sigama, kodwa phantsi amaxesha ngamaxesha kolawulo utitshala, ngoko ke impumelelo kwi-learning, lungisa ubizo: lamagama kwaye isigwebo ubume iya kuba obvious.
Esikolweni uzakufumana experienced-intanethi tutor isiswedish, nto leyo lula ukufunda ekude isiswedish kwixesha elifutshane, reaching i-babuza isiphumo.
Anike libanzi umqolo we iincwadi zezifundo, iinqwelo zemfundo uluncwadi, anike mathiriyali kuba zamisljeni ukuba kuza kuba negalelo a ngakumbi eziquqa assimilation le ezi zinto. Ukongeza, uza kunikwa flexible ishedyuli, malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-intanethi izifundo nangaliphi na ixesha, phambi rescheduling iiklasi.
Ngaphandle, umgama ukufunda ufumana i-cheaper, apho ikuvumela ukuba gcina.
Apha, ixesha ihlawulwe kwi-formulation echanekileyo ubizo, ngoko ke ukufundisa ukufunda kwaye phonetics. Kwi-isijamani i-ugxininiso lwalo eqalisiwe ukwakhiwa ilizwi umyalelo. Ngeli inqanaba ngu-learning izakhelo ka-unxibelelwano kwi everyday izihloko. Oku inqanaba iya kuba njengoko kuluncedo kuba abantu ukufunda izakhelo ka-Swedish kuba utyelele amazwe ye-Scandinavian Peninsula. Ezilungileyo Mini Kuwe. Mna andazi na European ulwimi.
Ntombi yam ubomi kwi-Sweden.
Ubizo ukundwendwela kunye naye. Iminyaka emininzi eyadlulayo ngexesha Ngezifundo, mna lezinto ezinako ukwenzeka, lubandakanya isifrentshi, kodwa ngoku ngokupheleleyo zilityelwe. Mna nyani ukuba chu ukufunda Swedish. Ndiyabulela kuba ingqalelo yakho. Mna nzulu ngendlela gymnasium kwi-Sweden kwaye mna, kufuneka utitshala abo babeya jonga phezu wam upelo coursework. Dibana nam ukuba unayo nayiphi na iziphakamiso. Mna nyani ukufunda isiswedish ukuze yiya kwi-ski resort ixesha elide. Uxolo, andazi ulwimi, kodwa ndiya kuba nguthixo wenu ukufunda. Ufuna ukufunda i-Swedish ulwimi kwi-intanethi. Ulwazi ayimfuneko ukuze unxibelelwano kwi khaya inqanaba.
Iindidi umphinda-phinde ngo ngeveki.
Ngaphambili lezinto ezinako ukwenzeka, lubandakanya isijamani kwi-Institute.
Ungathanda ukuhlaziya zabo ulwazi isiswedish ulwimi, lezinto ezinako ukwenzeka, lubandakanya kakhulu ixesha elide.
Uqukuqelo - phinde ngeveki. Siyabulela kwangaphambili. Na injongo, Adelaide wamkelekile. Mna na isiswedish ulwimi. Mna xa watyelela abahlobo kwi-Sweden wawa ngothando kunye kweli lizwe. Mna nento yokuba zithanda ukuphila apho. Ndine umhlobo kwi-Sweden, kodwa andibanga kodwa kuthi.
Ndiyazi abancinane yakhe intetho.
Ndingathanda ukwazi njani ukwakha izivakalisi. Kwaye ukuba ulwakhiwo zonke kwi heap.
Ndingayenza kabini ngeveki.
Iza kushenxiswa ukuba Sweden, ulwazi ulwimi zero. Ukuthetha Isingesi. Ungathanda ukwakha ixabiso kunokwenzeka, kwi-database Sweden.
Iindidi ingaba enqwenelekayo kwi-ngokuhlwa okanye impela-veki umphinda-phinde ngo ngeveki.
Ulwazi ulwimi lokuqala. Ndithetha isingesi kwaye isifrentshi. Iindidi ingaba enqwenelekayo kwi-ngokuhlwa okanye weekends, phinda-phinda ngeveki. Ohlala kuyo Sweden nyaka, uyazi, unako na ndithethe, yena fluent kwi-French kwaye isixhosa ukuba unako lokucebisa. Ndingathanda qala iiklasi. Wam inqanaba ngu iindlela zomzobo, ndithetha isingesi kwaye isifrentshi.
Mna eqale ukufunda incwadi isiswedish ulwimi kwi qela, kwaye ngexesha elithile nganye.
Ngoku ndise Sweden, studying ulwimi izifundo, kodwa ekude, hayi kwi qela. Mna ube inkxaso utitshala. phinda-phinda ngeveki kwi-daytime. Ndifuna ukuqala ukufunda, Lam inqanaba iqanda, xa ebe kwi-Tumba kuba ngonyaka, nazi ezinye phrases. Oza yiya Sweden kwi-zimbalwa zidlulileyo, ngoko ke ndifuna ukuthetha ubuncinane conversational intetho, ukufunda. Ulinde impendulo, Enkosi. Mna nyani ukuqala ukufunda isiswedish nge-Skype. Ukuthetha kancinane kwaye aqonde, kodwa kwi-siseko i-zero inqanaba.
ngesondo fun ividiyo free ividiyo Dating nge-girls ividiyo incoko couples esisicwangciso-mibuzo roulette kwi-intanethi ngaphandle ubhaliso Chatroulette kuba free esisicwangciso-mibuzo roulette esisicwangciso-mibuzo roulette kuba free fumana incoko roulette dating for free. ividiyo Dating sexy